के तपाइँकाे दाँत पहेँलो हुदैछ? त्यसो भए घरमै सेतो र चम्किलो पार्न यसो गर्नुस् – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > के तपाइँकाे दाँत पहेँलो हुदैछ? त्यसो भए घरमै सेतो र चम्किलो पार्न यसो गर्नुस्
के तपाइँकाे दाँत पहेँलो हुदैछ? त्यसो भए घरमै सेतो र चम्किलो पार्न यसो गर्नुस्
admin February 17, 2019 स्वास्थ्य 0
मानिसलाई सुन्दर देखाउने धेरै कुरामध्येको महत्वपूर्ण एक हो दात । बोल्दा वा हास्दा देखिने दाँत पहेलो भए त्यसले मानिसको व्यक्तित्वमा नै असर पु(याइरहेको हुन्छ । यही कारण कतिपय मानिस खुलेर हाँस्नसमेत हिच्किचाउँछन् । यतिसम्म कि हाँस्दासमेत मुखमा हात राख्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । दाँतलाई पहेँलो बनाउने कैयौँ कारण हुन्छन् । जसमा बढी चिया, कफी, तमाखु र चुरोटको प्रयोग पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो समस्याको सजिलैसँग घरमै उपचार गर्न पनि सकिन्छ ।
खाने सोडाः खाने सोडा (बेकिङ सोडा)को प्रयोग दाँत सफा गर्ने सबैभन्दा सजिलो विकल्पमध्ये एक हो । बेकिङ सोडाले दाँतमा भएको फोहोर निकाल्ने गर्छ । जसले गर्दा पहेँलोपन हटेर दाँत सेतो हुन्छ । यसका लागि टुथपेस्टमा बेकिङ सोडाको मिश्रण गराएर ब्रस गर्न सकिन्छ । यसमा कागती मिश्रण गरेर पनि मुख कुल्ला गर्न सकिन्छ । बेकिङ सोडालाई पानीमा घोलेर तयार पारेको मिश्रणले हप्ताको दुई दिन दाँत रगड्नुपर्छ, दाँत सफा हुन्छन् ।
कागतीः दाँतको पहेँलोपनबाट छुटकारा पाउन कागती प्रमुख अस्त्र हो । त्यसका लागि कागतीको रसमा नुन मिसाएर दाँतमा लगाउन सकिन्छ । र, केही समयपछि कुल्ला गर्न सकिन्छ । दुई हप्तासम्म लगातार यसो गर्दा दाँतको पहेँलोपन सफा भएर जाने गर्छ ।
नरिवलको तेलः नरिवलको तेल धेरै कुरामा फाइदाजनक छ । यो कपाल र अनुहारका साथसाथै स्वास्थ्यका लागि पनि निकै उपयोगी छ । त्यति मात्र नभएर, यसको प्रयोगले आफ्नो पहेँलो दाँतलाई चम्काउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि एक चम्चा नरिवलको तेल लिएर त्यसलाई आफ्नो दाँतमा लगाउन सक्नुहुन्छ । साथै, टुथब्रसमा केही थोपा नरिवलको तेल राखेर केही मिनेटसम्म दाँत ब्रस गरी कुल्ला गरेमा दाँत चम्किन्छन् ।
२ बर्षदेखि श्रीमान विदेशमा हुँदा लगातार अर्कैसँग याैन सम्पर्क गर्ने महिलाकाे पीडाः श्रीमानलाइ थाहा हुन्छ कि हुदैन?
आज २५ जनामा कोरोना पुष्टि, यसरी बढ्दैछ संक्रमितकाे सँख्या!
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी ज’न्माउने ६ सुत्र ! के भन्छ अध्ययन? जान्नुहाेस्